Oduu Ammee:Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa waliigaltee Master Pilaanii Finfinnee karoorfamee addaan citee ture hojiitti hiikuuf guyyaa har’aa haaromsee jira. | Kichuu
Posted on December 5, 2019 by kichuu_admin
#Oduu_Ammee:Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa waliigaltee Master Pilaanii Finfinnee karoorfamee addaan citee ture hojiitti hiikuuf guyyaa har’aa haaromsee jira.
Walgahiin waliigalteen kun itti gaggeeffame biyya Faransaay Magaalaa Lyon Metropoledha. Haromsa waliigaltee kanaarratti Presideentiin Lyon Metropole Mr. David Kimelfeld akka jedhetti Master Pilaanii Finfinnee jalqabamee addaan cite san hojiirra oolchuuf gama hundaan qophiidha jedheera. Kanaafis gargaarsa ogeessotaa fi maallaqaas ni gumaachina jedhe.
Kana booda namni maaster pilaanii Finfinneef du’u hin jiru. Taakkalaa Uumaa fudhatee boolla lixuu danda’a. Kana booda Oromoon Walabummaa Oromiyaaf falma; isa qofaafa wareegama.
Seenaa Oromoo fi Finfinnee
ኦሮሞ እና ፊንፊኔ ታሪክ በጥቂቱ
Dr Abiy Ahmad jijjiiramni caasaffama ADWUI irratti taasifame (PP’n) gaafilee ummata Oromoo deebisuuf murteessaadha jedha.
Shakkii fi mormiin walitti baquu ADWUI fi ijaaramuu PP’n wal qabatee ka’u akkuma jirutti ta’ee, jijjiiramni caaseffama paartichaa irratti taasifame kun yaaddoo qofa osoo hin taane carraas ni uuma.
1. PP’n aangoo mootummoota naannolee ofiin ofbulchuu (self rule) irratti dhiibbaa qabaachuu danda’a. Mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti makamoo waan ta’aniif mootummaan federaalaa karaa PPtiin qondaaltota mootummoota naannolee muuduu fi buusuu akkasumas kallattiin too’achuu danda’a. Kuni immoo sirna federaalizimii sabdaneessuummaa amma jiru laaffisuu mala sodaa jedhu uumeera.
2. PP’n sabummaa osoo hin taane, hirmaannaa dhuunfaa lammiilee jiddugaleessa godhetee waan gurmaa’uuf paarticha keessatti mirgoota garee (Waloo) kabachiisuuf qabsaa’uun hin mijaa’u. Gaaffileen Oromoon akka sabaatti gaafataa ture/jiru osoo hin deebifamin ODP diiganii PP ijaaruun kan yeroo isaa hin eegganne akka ta’e Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee namoota heddutu mormii dhageessisaa jira.
1. Mootummaan federaalaa ol’aantummaa seeraa kabachiisuu fi imaammata wal fakkaataa sadarkaa biyyaatti hojiirra oolchuun “hawaasa siyaasaa tokko” ijaaruuf haala mijaa’aa uumuu ni danda’a. Haaluma kanaan nageenya mirkaneessuuf caaseffamni paartii qeenxee kun gahee ijaarsaa taphachuu ni danda’a. Fkn. Qondaaltonni akka Abdii Ilee fi Naannoo Amaaraatti rakkoo nageenyaa uumaa turan kana booda karaa PPtiin too’annoo kallattii mootummaa federaalaa jala galu. Akka fedhan burraaquu hin danda’an jechuudha. Kuni ta’uun ol’aantummaa seeraa sadarkaa biyyaatti mirkaneessuuf haala mijeessa.
2. Walitti bu’iinsaa fi wal morkii sabummaa jiddu galeessa godhate hamma tokko tasgabbeessuuf haala mijeessuu ni danda’a. Sabboonummaa Itoophiyummaa fi sabootaa wal madaalchisuufis PP’n fayyaduu ni danda’a.
3. Ilaalcha abbaa dabarummaa fi shakkii qaama aangoo mootummaa federaalaa ol’aantummaan hoogganu irratti ka’u hamma tokko ni tasgabbeessa. Waggoota 27n darbaniif Wayyaaneen aangoorra turuun akka ummanni Tigraay addatti fayyadameetti ilaalame. Amma immoo waan Dr Abiyyi faati aangoorra jiraniif qofa “ol’aantummaa Oromootu lafa qabataa jira“ yaadni jedhu irra deddeebiin yoo kaafamu ni muldhata. Paartiin qeenxeen saboota hunda hammate biyya bulchuun walshakkii akkanaa hamma tokko ni xiqqeessa.
4. Ijaarsi PP akkaataa baay’ina ummataa fi miseensota paartilee walitti baqaniitiin raawwatama yoo ta’e saboonni gurguddoon bakka bu’ummaa madaalawaa qabaatu. Fkn. Baay’inni miseensota KHR fi KGG PP ummattoota Oromoo, Amaaraa, Somaalee, Tigree fi Sidaamaa fa’a bakka bu’an baay’ina ummattootaa (%) irratti hundaa’a taanaan hojmaatni paartichaa dimookiraatawaa ta’a jechuudha.
5. Afaanonni hojii paartichaa heddummaachuun tokkummaa fi walqixxummaa sabootaa cimsuuf gahee ijaarsaa taphachuu ni danda’a. Keessattuu afaanonni hojii mootummaa federaalaa yoo heddummaatan waliigaltee biyyoolessaa (national consensus) uumuu fi tokkummaa lammiilee jidduutti cimsuuf faayidaa qaba.
PP’n Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo fayyaduu ykn miidhuu kan murteessu kaayyoo, fedhii fi hojmaata qondaaltota paartichaa ta’a. Yoo akkuma shakkamu kaayyoon MM sirna federaalizimii kana diiguu ta’e PP’n meeshaa mirgoota waloo sabootaa ittiin ugguran ta’a. Yoo kaayyoon guddaan caaseffama paartichaa aangoo dhuunfachuu qofa ta’e immoo Dr Abiy gaafilee waloo Oromoon gaafatu yeroo gabaabaa keessatti deebisuu ni danda’a. Yoo garaan isaa Oromoo bira jiraate hirmaannaa Oromoon siyaasa biyyattii keessatti qabu waaltessuun fayyadamummaa diinagdee fi hawaasummaa mirkaneessuus ni danda’a. Kana jechuun faayidaa fi miidhaan caaseffama paartichaatiin walqabatee dhufu fedhii fi kaayyoo hooggantoota paartichaa irratti hundaa’a jechuu dha.